Etu ị ga - esi bulie Twitter gị | Martech Zone
Ọ nwere ike ịdị ka ihe ọchị maka otu nwoke Twitter na-esote na-ada biputere ihe Infographic na otu esi eto eto gi… Mana aga m akowa.
N’ọnwa gara aga, anọ m na-ekpochapụ ọtụtụ iri puku akụkọ m na-eso na Twitter. Anọ m na-agbaso ihe ndekọ 30k, mana edepụtara m ya n'okpuru 5k wee gaa n'ihu na-ehicha ya. Ka m tufuru spammy akaụntụ, akụkọ ndị ahụ akwụsịla iso m… na-eme ka m na-eso ibelata.
Enweela m ọtụtụ ndị enyi m na mberede wee nwute ya. Ọ bụrụ na m sụgharịa gị - danye m ihe edeturu na m ga-eso azụ… ọ bụghị ihe onwe. Naanị m hapụrụ ndị folks na mberede. Agbanyeghị, laghachi na Infographic! Twiends etinyela mpempe akwụkwọ a maka otu esi eto twitter gị ma ọ dị mma yana saa mbara.
Ihe kachasị amasị m banyere ndụmọdụ a bụ na ọ bụ ndụmọdụ siri ike maka ịbawanye usoro dị mkpa. Ọ bụrụ n'ịga zụrụ ndị na-eso ụzọ gị site na ebe, ịnwere ike ịnwe ọnụọgụ dị elu, mana spam ga-ejupụta gị. Twitter na-arụsi ọrụ ike na-eto eto na ọnụọgụ ha na usoro a na-agbanwe site n'ime site na spam. Ihe atụ bụ enweghị ike ịchịkọta ndị mmadụ. Twitter agaghị ekwe ka… ma ha enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-eso en masse. Nke ahụ dara ogbi. Ọ bụrụ na Twitter ga-arụ ọrụ na ogo ọdịnaya dị na ya ma wepu ndị na-agba ọsọ - ogo ahụ ga-akawanye mma ma dọtakwuo ndị mmadụ n'elu ikpo okwu.
Nke a bụ otu esi eme Zụlite Twitter gị:
Ọkt 12, 2011 na 4:20 PM
M na-enwekarị obere na nke a na-echekarị na Twitter. Ma m na-eche na afọ ọhụrụ. Enwere m ike itinye ego na TweetAdder. Naanị ka m nwee ike imezi usoro ahụ ntakịrị.
Ọkt 12, 2011 na 7:39 PM
Echere m na TweetAdder nwere ụfọdụ oké atụmatụ… ma ụfọdụ dị ize ndụ ndị. Dịka ọmụmaatụ, m hụrụ ikike ịchọ site na profaịlụ na ibudata listi ezubere iche. Agbanyeghị, enwere ohere dị ukwuu ịmegbu sistemụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Jiri nlezianya na-akpachara anya ka ị ghara iji ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Ọkt 13, 2011 na 2:01 AM
Anurum ihe i na ekwu. Ọ bụ ya mere m ji agbakwunye ndị mmadụ m na-eso ma na-esoghị aka. Amaara m na iji TweetAdder ị nwere ike ime nke a na akpaghị aka n'etiti ndị ọzọ
ihe. Mana ana m atụ ụjọ ịme nke a.
Ọkt 14, 2011 na 10:30 AM
Nke a bụ anya nnụnụ mara mma maka ile anya na ime ihe na-achọghị. Daalụ maka ịkekọrịta.